Maamulaha gobolka Nangarhar ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in idaacad lagu magacaabo Sadai Khilafat ama Codkii Khilaafada, taas oo faafisa wararka ururka ISIS, ay hadda joojisay baahintii ay ka wadday gobolkaas Nangarhar.
Idaacadda oo ku dayata kuwa ururka ISIS uu ku leeyahay dalalka Suuriya iyo Afghanistan ayaa waxay hawada gashaa ugu yaraan hal maalintii si ay u soo jiidato ragga da’da yar ee reer Afghanistan, kuwaas oo shaqo la’aan ba’ani ku hayso dalkaas. Tirada shaqo la’aanta ah ayaa la sheegaa inay 24% gaarayso.
Atta Khogyani oo ah afhayeenka gobolka Nangarhar ayaa VOAda ku sheegay in maamulka gobolku uu ku guuleystay inuu joojiyo wararkii Idaacadda. Waxa uu intaas ku daray in maamulku uu hadda ka shaqeynayo sidii uu ku heli lahaa halka ay idaacaddu ka soo hadlayso.
Qaar saraakiisha gobolka ka mid ah ayaa sheegay in laga yaabo in xoogag shisheeye ay dawladda Afghanistan gacan ka siiyeen sidoo idaacadda kooxda ISIS hawada looga saari lahaa.